राज्यबाट आतंक सिर्जनाः आरोपित | चितवन पोष्ट दैनिक
राज्यबाट आतंक सिर्जनाः आरोपित
२०७० चैत्र ९, आईतवार ०२:५० गते
भरतपुर । गोरखा फुजेल–७ का कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणका आरोपितका परिवारहरुले पटक–पटक आफूहरुलाई पक्राउ गरी राज्यले आतंक सिर्जना गरेको बताएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले निर्दोष व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानको भिल्ला भराउँदै दुःख दिएकोमा आपत्ति जनाए । सोही घटनाका आरोपित भनी २५ दिन हिरासतमा रहेर रिहा भएका भरतपुरका पर्शुराम भनिने अजिव पौडेलले निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मानवअधिकार उल्लंघन गरेको बताउनुभयो । अधिकारीको हत्याको आरोपमा शुक्रबार पक्राउका परेका आफ्ना बुबा ७२ वर्षीय छविलाल पौडेल निर्दोष रहेको भन्दै अजिवले वृद्व व्यक्तिलाई अनावश्यक दुःख दिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहा“ले घटनामा संलग्नै नभएका वृद्व व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नु कति न्यायोचित हुने भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरुलाई समेत मानवअधिकारको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहा“ले घटनाको वास्तविक आरोपितहरुको पहिचान भइसकेको अवस्थामा आफूहरुका परिवारलाई बारम्बार पक्राउ गरी दुःख दिएको भन्दै मानवअधिकारकर्मीलाई प्रश्न गर्नुभयो के हाम्रो मानव अधिकार छैन ? बारम्बार बिना आधार लान्छना लगाउने र दःख दिनु नेपालको कुन कानुनमा व्यवस्था छ ?
सोही घटनाका आरोपित परिवारकी गोमा पौडेलले विना प्रमाण बारम्बार एक–एक गरी पक्राउ गर्नुभन्दा सबैलाई एकै पटक पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘रातारात घरमा आएर हामीमाथि आतंक सिर्जना भइरहेको छ, जाहेरीमा परेका सबैलाई उपस्थित हुन भन्नूस् हामी सबैलाई प्रहरी कार्यालय पु¥याउँछौं’ गोमाले भन्नुभयो ।
चितवन प्रहरीले सोही घटनाका आरोपी बिहीबार राति र शुक्रबार बिहान फुजेल ७ का छविलाल पौडेल र रनपा ११ जिरौनाका भीमसेन पौडेललाई पक्राउ गरी म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको छ । यसअघि पनि प्रहरीले आरोपितहरु रामप्रसाद अधिकारी र पर्शुराम भनिने अजिव पौडेललाई पक्राउ गरी २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि आवश्यक प्रमाण नपुगेको भन्दै छोडेको थियो ।
चितवन प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी अधिकारी हत्याका प्रत्यक्ष संलग्नहरुको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । ती मध्य दुई जनाको द्वन्द्वकालमै दोहोरो सुरक्षा कारबाहीमा मृत्यु भएको जनाएको छ भने अर्का एक जना रत्ननगरका रूद्र आचार्य हाल वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बेलायतमा रहँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।